Asongadin’ny Lahatsarinà Vehivavy Somalianina Ampijaliana Ny Loza Atrehin’ireo Mpitsoaponenana Ho Any Eoropa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Jona 2017 20:00 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, বাংলা, Português, Français, Español, English
Vondronà Somalianina mpifindra monina ao Libia. Sary an'i Salman Jamal nampiasaina niaraka tamin'ny fahazoandàlana.
Any Somalia, mitarika ny tanora hanao sorona ny ainy hiala ny tanindrazany ho any Eoropa ny tsy fahampian'ny tolotr'asa sy ny ady an-trano. Miatrika fanararaotana sy fanambakana izy ireo, avy amin'ireo vondrona mitam-piadiana ary koa ireo tambajotra mpanao trafika miasa ao Libia, izay hiaingan'ny maro amin'ireo dia an-tsambo tsy zarizary.
Somaliana iray toa izany i Sumaya Jama, 15 taona. Nanapa-kevitra ny hanainga ho any Eoropa izy, kanefa vao haingana izay dia tafalatsaka teo am-pelatànanà vondrona iray izay nangataka 8.500 dolara Amerikana ho famotsorana azy. Nalain'izy ireo horonantsary izy, voakaravasy, miaraka amin'ny tanana aman-tongony nofatorana eo amin'ny tany.
Tsy ela dia niparitaka be ilay lahatsary (rohy mitondra mankany aminà votoaty manelingelina), ary niafara taminà hetsipanentanana fanangonam-bola teo anivon'ny vondrom-piarahamonina Somalianina, izay nahangona teo amin'ny 15.000 dolara Amerikana teo mba hamotsorana azy.
Nipetraka niaraka tamin'ny reniny i Sumaya tao Dadaab (ao Kenya), ilay ivontoerana faharoa lehibe indrindra ho an'ny mpitsoaponenana eran-tany, talohan'ny niezahany handeha ho any Eoropa. Nilaza ny reniny, Nim’o Sultan, 48 taona, fa tohina izy nijery ny zanany nampijaliana tao anatin'ilay lahatsary. Nilaza tamin'ny nanoratra ity lahatsoratra ity izy, ”tena tohina tanteraka aho nahita ny lahatsariny ka tena tsy vitako na ny manazava izany aza. Tsy misy olona na dia iray aza mendrika ny hatao toy ireny na inona na inona zava-bitany.”
Any Libia i Sumaya amin'izao fotoana izao; tsy mbola mazava tsara raha mbola hiverina any amin'ny reniny any Dadaab izy na mbola hanandrana indray ho any Eoropa.
Mangataka vidim-panavotana amin'ny alàlan'ny lahatsary fampijaliana
Taorian'ny famotsorana an'i Sumaya, namoaka lahatsary hafa izay mampiseho ny fanararaotana Somalianina telo hafa ireo mpanao trafika. Inty ambany ity ny iray amin'ireo lahatsary manelingelina:
Naka lahatsary ny tenany midaroka Somalianina mpifindra monina mifady hanina ireo mpivarotra olona any Libia & nandefa izany tany amin'ny fianakaviany any Somalia ho fangatahana vidim-panavotana.
Maka vidim-panavotana ireo mpanao trafika amin'ny fanaovana lahatsary fampijaliana ireo mpitsoaponenana sy mpifindra monina hazonin'izy ireo. Nilaza i Salman Jamal, izay nitatitra ny tantaran'i Sumaya ary mpanao gazety ao amin'ny Fahitalavitra Universal Somali miorina ao Tiorkia, fa tsy manana fahafahana handoa ny vidim-panavotany ireo Somalianina miseho ao anatin'ireo lahatsary tahaka ity ka mila vonjy mba handoavana ny fahafahany. Na izany aza, ”ny ankamaroan'ny fotoana dia manao izany mba hampisehoana fotsiny ny zavatra mety ho vitany ireo mpanao trafika.”
Tsy any Eoropa foana ireo Somalianina mpitsoaponenana no mandeha, kanefa misy zava-doza ihany koa any amin'ny dian'izy ireo mankany aminà toeran-kafa. Tamin'ny Martsa 2017, farafahakeliny dia Somalianina 42 no maty raha nisy angidimby iray tsy fantatra nitifitra sambo nitondra mpitsoaponenana tany amorontsirak'i Yemen. Ho any Sodana izy ireo tamin'izay.